श्रीमतीबाट अलग हुन आफैं धम्कीपूर्ण म्यासेज, आफैं शरीरलाई ब्लेडले काटे ! - Everest Dainik - News from Nepal
श्रीमतीबाट अलग हुन आफैं धम्कीपूर्ण म्यासेज, आफैं शरीरलाई ब्लेडले काटे !
धनगढी : भनिन्छ, सत्य कुरा लुक्दैन । त्यस्तै घटना भएको छ कैलालीमा । डोटीको जोरायल गाउँपालिका, ३ का २५ वर्षका हेम प्रकाश मल्लले आफ्नो श्रीमतीबाट अलग हुन भन्दै अपरिचित व्यक्तिले मेसेज गर्ने गरेको र सोहि व्यक्तिले आफ्नो शरीरका बिभिन्न भागमा काटेर घाइते बनाएर कैलाली गोदावरी नगरपालिका, ४ को गोदावरी जंगलमा छोडेको प्रहरीलाई बताएका थिए ।
मल्लले सो कुरा बताएपछि प्रहरीले उनलाई उद्दार गरेर उपचारका लागि सामुदायिक अस्पताल अत्तरियामा ल्यायो । अनुसन्धान गर्दै जादा मल्लले आफ्नो व्यक्तिगत कमजोरीको कारणले गर्दा श्रीमतीसंग अलग हुनको लागि आफैंले लुकाई राखेको नम्बरबाट आफ्नो मोवाइल नम्बरमा धम्काएको मेसेज पठाउने गरेको खुलेको छ ।
मल्लले आफैंलाई आफैंले धम्याउनुका साथै शरीरका विभिन्न भागमा आफैं ब्लेडले काटेको जिल्ला प्रहरीले कार्यालय कैलालीले जनाएको छ । पछि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गर्दा मल्लले घटना आफैंले गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
मल्लमा मानसिक समस्यासमेत रहेको देखिएकोले आफन्तको जिम्मा लगाइएको कैलालीका प्रहरी नायव उपरिक्षक तथा प्रवक्ता दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिए ।
ट्याग्स: जिल्ला प्रहरीले कार्यालय कैलाली